१२ जेठ २०७४
पोखरा, १२ जेठ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नं ३० र ३१ मा नेकपा (एमाले)को प्यानलै विजयी भएका छन् । वडा नं ३० मा एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्रीराम पोखरेलले दुई हजार २८ मत प्राप्त गरी विजयी बने भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका दुर्गाप्रसाद सुवेदीले एक हजार ९२५ मत प्राप्त गरे । वडाको महिला सदस्यमा शारदा बास्तोला, दलित महिला सदस्यमा रमा नेपाली, खुला सदस्यद्वय… विस्तृत समाचार
डा. प्रदीप भट्टराई । नेपाल सबै खाले संक्रमणमा छ । हरेक तह र तप्कामा दुईवटा वर्ग प्रष्टस“ग देखिएको छ, एउटा शासक, अर्काे शासित । यी दुईबीचको द्वन्द चरमसीमामा पुगेको छ । तर, दुर्भाग्य शासित वर्ग द्वन्दमा छैन यहा“ आत्मसमर्पण गरिरहेको छ। यो आत्मसमपर्णमा उ कि त मुलुक छोडेर विदेशिदै छ कि मुलुकमै रहेर पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बा“च्न विवश छ । अनि, हरेक क्षेत्रका… विस्तृत समाचार
२८ भाद्र २०७३
डा. प्रदीप भट्टराई । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसै साता दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा निस्कदैछन् । प्रसंगवश, यतिखेर मुलुकको राजनीतिक मुद्दा नै उनको भारत भ्रमण भएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रको ध्यान केन्द्रीत गरिरहेको यही विषयमा अरूका कुरा सुन्न र आफू प्रष्ट हुँदै कुरा राख्न इमान्दार प्रयत्न गरिरहेकै जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि यो कुनै नौलो विषय हैन, हरेक पटक भारत… विस्तृत समाचार
२१ भाद्र २०७३
डा. प्रदीप भट्टराई । मुलुकको सरकार र समाज आफ्ना नागरिकहरू विदेश खेद्न लाठो लिएर लागेको छ । सरकार एकै दिनमा राहदानी मात्र बनाई दिइरहेको छैन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाइ नि:शुल्क हवाइ टिकट र वर्क प्रमिटको व्यवस्था पनि गरिदिँदैछ । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र वीमाको व्यवस्था पनि हुँदैछ त्यति मात्र हैन, अझ कुशासन लादेर मुलुकमा बस्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना पनि गरिँदैछ । समाज पनि मुलुकमा बस्नेलाई नालायक… विस्तृत समाचार
डा. प्रदीप भट्टराई । नसोध तिमीलाई देशले के दियो सोच तिमीले देशलाई के दियौ ? अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको बहुचर्चित भाषण आस्क नस्ट ह्वाट योर कन्ट्री क्यान डु को नेपाली भावानुवाद हो यो । संसारभरकै ठूला राजनेताहरू यही प्रश्नका साथ आफ्ना सम्बोधनहरू अन्त्य गरेर जनतालाई राष्ट्रका लागि केही गर्न अभिप्रेरित गर्छन् । राष्ट्रभक्ति जगाउन प्रयोग गरिने यसको जोडा भनाइ पाउन मुस्किल मात्र हैन, लगभग… विस्तृत समाचार
डा. प्रदीप भट्टराई । नेपालका एकमात्र फोब्र्स बिलिनियर विनोद चौधरी यतिबेला अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनको भ्रमणलाई लिएर यतिबेला पाताल प्रवासतिरको सामाजिक सञ्जाल गर्माएको छ । उनको पक्षमा मात्र हैन, विपक्षमा पनि धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन् । उनीसँग खिचिएका तस्वीरमा गौरव गर्नेहरूको संख्या मात्र छैन, नखिच्दा खुशी हुनेहरूको संख्या पनि कम छैन । आमसञ्चारको भाषामा वर्ड अफ माउथ मात्र हैन, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएका छन्… विस्तृत समाचार
भूकम्पको कलेबरमा कुरीकुरी समाजसेवीहरू... !
डा. प्रदीप भट्टराई । नेपालको राजनीतिका बारेमा जति लेखे पनि मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा स्खलन आएको यतिबेला त्यो लेखनले खासै रंग ल्याएन । त्यसैले यसपटक अमेरिकामा रहेको नेपाली डायस्पोराको भूकम्प धन्दाका बारेमा लेख्ने जमर्काे गर्दैछु । गत वर्ष वैशाख १२ गते नेपालमा महाभूकम्प गयो । सयांै मानिसको ज्यान गयो । हजारौं घरबारबिहीन भए । त्यसपछि आएका हजारांै पराकम्पले अझै पनि आर्तहरूका खाटा बसेका घाउ बल्झाइरहेकै… विस्तृत समाचार
उपाय एउटै छ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन
२५ श्रावण २०७३
डा. प्रदीप भट्टराई । नेपाल स्मरणशक्ति गुमाएकाहरूको मुलुक हो । यसो भन्दा राम्रो नसुनिएला । तर, मुलुकको तीतो सत्य हो यो । यहाँका अधिकांश मान्छेका लागि नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिस्र्याे हुन्छ । भनाइ नै छ, आयो गयो माया मोह, आएन गएन को हो को हो ? यो नौ दिनमा नौलो हुने कुरासँग एउटा अर्काे संजोग पनि छ, मुलुकमा सामान्यत: नौ महिनामै सरकार… विस्तृत समाचार
धारेहात लगाउन अभिशप्त हातहरू
१८ श्रावण २०७३
डा. प्रदीप भट्टराई । मुलुकमा ओली सरकार गएर दाहाल सरकार आउने चाँजोपाँचो मिलाइँदैछ । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि दिइएको सात दिने म्याद गुज्रेको छ । बहुमतीय सरकारका लागि उत्तिकै समयको अर्काे म्याद तामेली भएको छ । योसँगै मुलुकले अर्काे बुधबार नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुरानै अनुहार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पाउने छ । फरक यति छ, यसअघि उनी मुलुकको नम्बर १ पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री भएका… विस्तृत समाचार
११ श्रावण २०७३
डा. प्रदीप भट्टराई । कम्रेड केपी शर्मा ओलीको २ सय ८८ दिनको प्रधानमन्त्रित्व मुलुकका लागि अब इतिहास भएको छ । २०७२ साल असोज २५ गतेदेखि २०७३ साल साउन ९ गतेसम्म मुलुकमा को प्रधानमन्त्री थिए ? भनेर सामान्य ज्ञानमा प्रश्न सोधियो भने त्यस प्रश्नको सही जवाफमा उनकै नाम हुनेछ । यसो मात्र भन्दा अलि बढी अन्याय पनि होला । तर, यथार्थमा उनी आयाराम गयाराम प्रधानमन्त्री मात्र भएनन्,… विस्तृत समाचार